Howgallo isugu jira baaritaano iyo kuwa amni sugid ah oo ka socda Magaalada Beledweyne (Dhegeyso) – Radio Daljir
Agoosto 15, 2013 5:51 b 0
Beledweyne, August 15, 2013 – Ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa howlgallo Dad badan lagu qabqabtay waxaa ay ka sameeyeen Xaafado ka tirsan Magaalada Baladweyne ee xarunta Gobolka Hiiraan.
Howlgallada Ciidamada Dowladda iyo kuwa AMISOM Xaafadaha ay ka sameeyeen waxaa ka mid ah Xaafadaha Xaawo-Taako iyo ?Buundo-weyn, waxaana lagu soo qabqabtay tiro dad ah kuwaaso oo Saraakiish ciidamada Dowladda Soomaaliya ee Gobolka Hiiraan ay sheegeen in lala xiriirinayo in ay ka tirsan yihiin Al-Shabaab .
Taliyaha saldhiga dagmada Baladwayne Cali dhuux Mahad alle oo maanta waraysi siiyey radio daljir ayaa ka warbixiyey? hawl galadaasi, Taliyuhu wuxuu sheegay in ay jiraan dad badan oo la qa-qabtay kuwaas oo laga shakiyey.
Mahad-Alle wuxuu sheegay in howgalladu ay socdeen ilaa toddobaadkii hore markaas Beledweyne lagu qabtay 40 ruux oo laga shakiyey, in kastoo markii dambe la sii daayey oo wax dembi ah lagu waayey.
Howgallada ayaa weli ka socda Beledweyne tan iyo markii halkaasi ay ka dheceen dilal is xig-xiga oo lala eegtay masuuliyiin iyo cuqaal ka tirsan kuwa gobolka, Toddobaadkii hore ayey ahayd markii halkaasi lagu dilay Askari ka tirsan ciidanka Dowladda
Dhegeyso waraysi uu weriye Jaamac Cabdiraxmaan la yeeshay Taliye Cali dhuux Mahad-alle
Baahin: Khamiis 15- August -2013, Caawa Iyo Daljir, Weriye Khadar Cawl Ismaaciil ~ Daljir ~ Buhodle